Mkpa Ọ Dị Nwaanyi Inye Ohere Tupu Ọ Mụa Nwa Ọzọ - Igbo News | News in Igbo Language
Aug 16, 2021 - 15:29
Uche Nwamba dere edemede a
Mgbe nwaanyị alụbeghị di, ọ na-ekwu na ya ga-amụ ụmụ anọ ma ọ bụ ise ma na ọ dịghị echeta na ọ dị mkpa inye ohere mgbe ọmụsịrị nwa nke mbụ tupu ọ mụa ọzọ. Ụfọdụ na-asị na ha ga eji afọ atọ ma ọ bụ ise mụọ ụmụ ole ha chọrọ.Ndị na-ekwu out a amaghị na ọ nwere nsogbu dị na ya.
N’ezie, nwanyị tụrụ ime ọhụrụ, o nwere ndị ọ na-enye nsogbu.Tupu ha enweta onwe ha, ọ ga eru ihe dịka ọnwa isii. Na ọnwa ahụ nile, ha na arịa ọrịa n’ihi na ọtụtụ ihe dị mkpa na-enyere ahụ aka a dịghị n’ahụ ha. Oge ụfọdụ, ha adịghị eri nri nke ọma. Mgbe ụfọdụ, agụụ adịghị agụ ha. Ụfọdụ a naghị enwe ego iri ihe na-agụ ha.Mgbe ha ga amalite inweta onwe ha, afọ ime ha eruoola ihe dịka ọnwa ise ma ọ bụ.Ike a naghị adịkwa ha ime ihe ha chọrọ ma ọ bụ ịga ozi n’ụlọ ha.
Mgbe ha mụsịrị nwa, site na ọnwa mbụ ruo na ọnwa atọ ma ọ bụ anọ,ha a naghị enwe ike n’ihi na ọtụtụ ihe pụrụ ha n’ahụ mgbe ha mụrụ nwa tinyere nwa n’ańụ ha ara.
Ihe ndị a ka o ji kwesi na nwayị ga-enye onwe ya ezi ohere tupu ọtụrụ ime ọzọ. Ọ bụrụ na o nyeghị onwe ya ohere, nke a ga-eme n’ọ dị ime ọzọ mgbe ahụ ya anọchibeghị,ọ na enwe ọtụtụ nsogbu. Ọ bụrụ na nwanyị mụa nwa, onyeghị ohere were dị ime ọzọ, nke a ga eme ka ọ ghara inwe ike ilebara onwe ya na nwa ya anya n’ihi mgbakasị ahụ.
Ọ na-enwe mgbakasị ahụ, obi ụtọ anaghị adịrị nwa ahụ n’ihi na nne ya adịghị elebara ya anya otu okwesịrị. Mgbe ụfọdụ, nke a ga-eme ka nwa ahụ ghara inwe ezi otuto n’ihi na nwa ahụ agaghị ańụ mmiri ara lọlụ alọ n’ihi afọ ọhụrụ ahụ nne ya bu.
N’ezie, ọ bụrụ na nwanyị enyeghị ohere mgbe ọ mụsịrị nwa were dị ime ọzọ, ọ na-enwe ọtụtụ nsogbu.Nke mbụ bụ na ahụ ike ya agaghị ezu oke, ọ gaghị ejenwu ozi n’ụlọ ya.
Ọ bụrụ nwanyị enweghi ihe ọ na-alụ ma ọ bụ na di ya ejighi ego ikwado ya, ọ malite na-ata ahụ. Ịzụ otu nwa dị ọlụ, kedụzị maka mgbe nwanyị dị ime ma kuru nwa n’aka mgbe okwesịghị. Nke a ga-eme nwanyị ahụ ịnọ na ezigbo mkpa. Mgbe ọ mụrụ nke abụọ, nsogbu ya adị abụọ. O rue mgbe ha ga-ebido akwụkwọ, nsogbu adị n’ihi na ọ bụ otu ihe ka ọ ga na-achọrọ ha abụọ otu mgbe. Idebanya aha otu onye na-afia ahụ ma ya bụrụ mmadụ abụọ na atọ otu mgbe. Ọ bụrụ ebe ego adịghị, a hapụ otu n’ụlọ rue ihe dị ka afọ isii tupu e bidoro ya akwụkwọ.
Mana ọ bụrụ na nne nyere ohere tupu ọ dị ime ọzọ, ọ gaghị enwe nsogbu ọ bụla na iledo nwa ahụ anya nakwa I bidoro ya akwụkwọ. Ọzọkwa, ya onwe ya bụ nne ga-enwe ahụ ike zuru oke iji lụọ ọlụ ya ma ọ bụ zụọ ahịa, chụtakwa ego iji nye aka na ezinaụlọ ya n’ihi na ọ gaghị ahapụrụ nanị di ya ịkpata ego e ji enye aka na ezinaụlọ ha.
Ọ bụrụ na nwanyị enyeghị ohere na nke ọ mụrụ tupu ọ dị ime ọzọ,ọ ga-eme na ọ gaghị enye nke o bu uzo mụ ezi nlekọta na ihunanya zuru oke maka na nwa a mụrụ ọhụrụ chọrọ ka nne ya na eku ya n’ahụ mgbe ọ bụla ọ chọrọ, na-enye ya ara na nri mgbe ọ chọrọ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ahụ adịghị nwa ahụ, ọ ga-achọ ka nne ya kwọrọ ya n’azụ ma ọ bụ kuru ya na aka mana ọ bụrụ na nne ya bu afọ, ọ gaghị enwecha ohere imere nwa ahụ ihe nile ọ chọrọ mgbe ahụ.
Inye ohere wee dị ime na-eme ka nwanyị na nwa nwee ahụ ike zuru oke ghara ịdị na-atufu ego n’ụlọ ọgwụ. Ọzọkwa, nwanyị ga-enwe ike na-eso di ya na-apụ apụ.